लाजधानी कि राजधानी ?
लोन्ली ट्राभल एजेन्सी विश्वकै प्रतिष्ठित ट्राभल एजेन्सी मानिन्छ । यही एजेन्सीले नेपाल विश्वकै भ्रमण योग्य स्थल भनेर प्रचार गरिरहेको छ । काठमाडों त पुग्नैपर्ने, हेर्नैपर्ने उत्कृष्ठ थलो भनेर व्यापक प्रचारसमेत गरेको छ । र, यही ट्राभल एजेन्सीले विश्वमा संस्कृति, धर्म, परम्परा र पूर्वीय दर्शन जान्नका लागि स्वर्गको शयर भनेको छ । धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदा र इतिहासको धरोहर भनेको छ ।
के नेपालको त्यो आकर्षण कायमै छ त ? छ, हरेक दृष्टिकोणले नेपाल पर्यटन केन्द्र हो । तर जब एउटा पर्यटक एयरपोर्टमा उत्रन्छ, उसको स्वागत अव्यवस्था र दुर्गन्धबाट सुरु हुन्छ । उतै खकार, उतै दिशापिसाव । अनुशासनहीनता जताततै । पर्यटकको पहिलो पाइलामै नेपालबारे दुर्गन्धपुर रहेछ भन्ने पर्छ ।
जब पर्यटक काठमाडौं छिर्छ, त्यसपछि ऊ टेक्सीमा ठगिन्छ, होटलमा ठगिन्छ, किनेमलमा ठगिन्छ । राजधानीको फोहर, धुलो, धुवाँले वाक्क हुन्छ । राजधानी यतिसम्म घीनलाग्दो छ कि पर्यटक उकुशमुकुस हुन्छ, पर्यटकलाई कसरी स्वागत गर्ने, उसको बसाई कसरी लम्ब्याउने, उसलाई नेपालका विभिन्न प्राकृतिक सुन्दरतातिर कसरी लोभ्याउने भन्ने कुनै योजना कसैमा देखिदैन । सबैका सबै गैरजिम्मेवार छन् ।
यति भइकन पनि पर्यटक बढ्दो छन् । पर्यटक ओइरिन थालेको कारण राज्यको, पर्यटन मन्त्रालय अथवा प्रवद्र्धन बोर्डको, पर्यटक संघसंस्थाको सक्रियताले होइन, मात्र नेपालको प्राकृतिक सुन्दरता हेर्ने लालसाले । नेपालको धर्म, संस्कृति, जात्रा, पर्व, उत्सवमा रमाउने लालसाले । ३७ देशका विद्यार्थी समेत पढ्छन् नेपालमा यतिखेर । तिनले समेत नेपाली समाज, नेपाली जनता साह्रै सोझा, सरल र भाइचाराका छन् भन्ने प्रचार गरिरहेका छन् । यसकारण पर्यटक बढेका हुन् ।
विश्वलाई थाहा छ, नेपाल प्रगतिको कागजी घोडा दौडाउने मुलुक हो भनेर । नेपाल उच्च भ्रष्टाचार हुने मुलुक हो भन्ने पनि थाहा छ । जतिसुकै दह्रो सरकार आओस्, सबै भ्रष्टहरुको सेटिङमा चलिरहेका छन् । पद्धति बसाल्न कोही तैयार छैनन्, पद्धतिको भाषणमात्र गर्छन् भन्ने पनि सबैलाई थाहा छ । सुरक्षा व्यवस्था, निर्माणको काम, सुशासनको जिम्मेवारी कसैले निर्वाह गरिरहेका छैनन् । राजधानी काठमाडौंको नियत बिग्रेर देशकै नियत बिग्य्रो, काठमाडौं लाजमाण्डौ भयो ।